Ny fijery isan-taona: ny famerenana ny fampielezan-kevitra dia tahaka an'i Anass Wassenaar | Martin Vrijland
Home » ankapobeny » Ny fijery isan-taona: ny famerenana ny fampielezan-kevitra dia tahaka an'i Anass Wassenaar
Navoaka tamin'ny Dec 21, 2013 ao ankapobeny, Case Anass | 34 hevitra
Ho avy ny faran'ny taona ka ny Main Stream Media dia hamerina ny lainga izay nambaran'izy ireo tamin'ny anaran'ny fanjakana nandritra ny taona lasa. "Raha hadinonao izany, izany no dikan-tenin'ny fahamarinana izay tsy maintsy tadidinao", Izany no hafatra fototra. Ny ohatra manintona indrindra amin'ny androany dia ny fandinihana Febroary 2013 Ao anatin'izany, ny valin'ny Anass Aouragh avy ao Wassenaar dia averina indray. Ny Telegraaf dia maneho mazava ny zavatra tokony hotadidinao ary tsy manonona izay azonao adino ny tsara indrindra.
Mety ho tezitra i Anass tany an-tsekoly, fa ireo mpiara-belona hitanay dia tsy miresaka momba ny herisetra toy izany fa mety ho antony hamono tena izany. Na izany aza dia ny filazana lavorary mba hitazonana ilay tranga eo ambanin'ny rakitra mavesatra. Ankoatra izany, ny Sampan-draharahan'ny Fampanoavana tatitra avy amin'ny NFI ho toy ny tari-dalana, raha maro ireo mangana eo amin'ny kibon'ny ankavia sy ankavanana ao Anass, ny fantsika rehetra dia manga ary maro ireo zavatra hafa izay tsy voalaza ao amin'ny tatitry ny NFI. Na ny kavina Anass aza dia miavaka, raha toa ka tsy maintsy mihetsika ny tsipika mihantona rehefa mihantona. Mbola maro ireo fanontaniana miavaka momba ny raharaha. Tsy misy valiny hatramin'izao na tsy feno valiny. The timeline momba ny vono olona rehetra dia mbola manontany tena ihany ireo fanontaniana mafonja (jereo koa eto).
Ny zava-manahirana indrindra dia mazava ho azy:
Ahoana no hahatonga izany? helikoptera miaraka amin'ny fakantsary infrarozia mitady sehatra iray izay tsy mihoatra ny toeram-pambolena alika ary tsy mahita na inona na inona; Tsy mahita na inona na inona ny alika, fa i Anass ny ampitson'iny mbola eo amin'ny toerana izay efa tadiavina?
Nahoana no maraina be? ny ekipa camera Nanomboka tamin'ny vanim-potoana omen'i Omroep West raha tsy nisy ny fanamarihana fa ho hita i Anass?
Nahoana no tsy navela hanasa an'i Anass tany amin'ny toeram-pitsaboana ny rainy raha tsy tamin'ny fandevenana?
Nahoana ny renin'i Anass no nandroaka ny tatitra momba ny NFI tamiko - raha vantany vao nipoitra taorian'izay - toy ny lasibatra ny rain'ilay saka to accuse ary mba hahazoana antoka fa tsy te-hanome azy fampahalalana misimisy kokoa ny Sampam-panjakana misahana ny Fampanoavana?
Nahoana ny reny no miezaka mafy hanohitra ny fanadihadiana 'antony hafa noho ny famonoan-tena' sy ny taona manaraka Nanomboka ny fanentanana media izay manome ny fahatsapana fa tsy mino ny famonoan-tena izy Marina ny rainy nanao ny zava-drehetra hanerena ny OM?
Mandritra izany fotoana izany, ny fitokisan'ny olona tahaka an'i Peter R. de Vries - izay nanomboka araka izay voalazany voalohany momba ity raharaha ity - niroborobo be. Ohatra, androany tao amin'ny gazety, dia nantsoina ho vavolombelona i Peter R. de Vries raharaha iray any Venray, izay ahitana an'i Petera mazava ho azy miasa ho an'ny OM. Peter R. de Vries dia tsy misy fomba mahaleotena intsony fa mba hapetraka fotsiny raha ny OM dia te hivarotra "fahamarinana" iray ho an'ny fiarahamonina amin'ny alàlan'ny gazety sy ny fahitalavitra. Peter R. dia nomanina rehefa ilaina izany, saingy eo am-piandohan'ny fotoana dia adino ny olona fa namany izy miaraka amin'ny mpamono voina antsoina hoe Rob Zegerius. Ity Rob Zegerius dia niara-niasa tamin'i Peter nandritra ny taona maro ary ny vadin'i Rob Zegerius dia mpiasan'ny Peter hatrany am-piandohana. Jereo ny resadresaka etsy ambany miaraka amin'i Steve Brown noho ny fanazavana amin'ny antsipiriany.
Na ahoana na ahoana, mazava fa ao anatin'ny herinandro sy herinandro maromaro izao ny raharaha Vaatstra dia hihintsana. Misy porofo sarotra sy tsy azo lavina izay maneho fa tsy i Jasper Steringa no tompon'andraikitra. Angamba dia misy olona vitsivitsy - anisan'izany i Peter R. de Vries sy ny mpisolovava Jan Vlug - izay hihaona amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ny fihetseham-po mampihetsi-po kely. Azo inoana fa mety ho tapaka ihany koa ny raharaha Anass. Ny fitokisan'ny mpampanoa lalàna sy ny NFI koa dia voakasika mafy. Ity porofo vaovao (izay naseho tamin'ny Janoary) dia manaporofo fa nanao fandikana goavana ireo fikambanana ireo.
Lisitry ny rohy loharano: Telegraaf.nl, Nu.nl, Steve Brown Blog
roccpro / Desambra 21, 2013
Anass Aouragh - Lisitra sy fametahana - fanadihadiana kely
R / Desambra 23, 2013
Tsy maintsy mikomy mafy isika (tsy misy herisetra) na zavatra iray.
Karinatjuh Gwn / Janoary 4, 2014
moondust1976 / Desambra 21, 2013
Tena mahaliana ahy izany porofo tsy azo lavina izany fa i Jasper S. dia tsy mpitsikera ao amin'ny famonoana an'i Vaatsra. Ny fampanantenana toy izany dia natao matetika ary tsy vita tanteraka. Manantena aho fa hafa izany amin'ity fotoana ity, saingy tsy mahazo aina amin'izany aho.
martin freedom / Desambra 23, 2013
moondust1976 / Desambra 24, 2013
Inona no fototra ijoroanao? Fantatrao ve? Efa fantatrao ve hoe iza no mahazo porofo?
martin freedom / Desambra 24, 2013
Wim Dankbaar sy Hans Mautitz dia manana porofo marobe izay milaza tena. Raha tsy fantatro izany dia tsy ho azoko antoka loatra.
Tsara izany, saingy tsy tokony ho matahotra ny fiainany ve ny raim-pianakaviana raha tena mampidi-doza ny Tolotra sy ny mpiara-miasa aminy? Manantena aho fa noraisin'izy ireo ny fepetra fiarovana ilaina, ho an'ny tenany sy ho an'ny porofo, ary hanomana tsara azy ireo izany fanambarana izany. Ny lesona dia mampianatra antsika fa tsy ho mora ny mandondona ny olona ambony eo amin'ny seza fiandrianana.
Elien / Desambra 26, 2013
Moa ve izany porofo izany dia misy ifandraisany amin'ny tsipika mitaingina bisikileta amin'ny karazam-bary sasany? Karazana bisikileta am-bisikileta izay, ohatra, dia ampiasain'ny mpitandro filaminana iray ao an-tanàna ho toy ny bisikileta serivisy !!!!!
donquijotte / Desambra 23, 2013
Izaho koa. Tena tiako ny fanehoan-kevitra. Mety hanomboka hipoaka ve ny cesspit sa mety hamerana ny fahasimbana?
Elien / Desambra 21, 2013
Mba hahatonga ny marina momba ny famonoana an'i Annas dia afaka tonga haingana amin'ny latabatra. Mino aho fa tena ratsy be ny andro 1. Aiza ireo mpanadihady amin'io tranga io? Tokony hisy olona iray izay tsy afaka natory tamim-pilaminana hatramin'ny takariva / alina amin'ny famonoana! Eritrereto fa misy polisy iray nandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia manana feon'ny fieritreretana. Na dia naheno aza aho avy amin'ny loharanom-baovao azo antoka fa maro ihany koa ny fifehezana ny polisy. Oo pedos. Tsy noroahina izy ireo fa nafindra rehefa nahita na nanambara ny fialany. Ohatra i Emmeloord.
Ny fampisehoana malaza rehetra an'ny TV West dia tantara ratsy be. Tiako ny hanana fanazavana bebe kokoa momba ny fananganana ravina mena / fotsy ny alin'ny famonoana an'i Duinrell tao amin'ny 539. Novonoina tany ve ny polisy iray sa nisy namono fanavotana iray? Tao anatin'izany trano izany dia novonoina i Anass? Avia amin'ny olona. Ampahafantaro anao bebe kokoa. Na dia tsy mitonona anarana aza izany. Aza omena an'ireo tombontsoa 2 ireo ny fahafahana manararaotra izany fomba ratsy izany amin'ny fandaniana ny fiainan'ny zazalahy 13 iray taona. Sa kosa ianao tsy manana zanaka, zafikely na zanak'olon'io vanim-potoana io. Alao sary an-tsaina hoe tsy ho tafavoaka velona ianao raha toa ka niharan-doza ireo ankizy ireo
mpametaveta. Mitsangàna hamonjy ny olonao, ary aoka hihaino ny feonao.
schnijder / Desambra 23, 2013
@Elien fa trano rantsan-kazo 539 afaka diversionary, dia diso lalana nanao tetika ny nahavanon-doza ny fikorontanana, MANJAVOZAVO mba hamorona ary tatỳ aoriana dia foana ho lavo indray, ary mahafinaritra tantara mamorona nanaraka ny andalana, ohatra: Eny misy famonoana sns nitranga angamba Teo i Anass, angamba tsy tafiditra. Hitsangana am-pilaminana ve ianao, olom-pirenena ao amin'ny faritra avaratry ny Tendrontany, satria mijery izany rehetra izany izahay. Nefa tsy tena !!
Antsoina hoe fahadisoana izany. Ity fampielezan-kevitra ity dia soritana amin'ireo saina sandoka rehetra, ohatra 911, fametavetana ary famonoana hafa mba hametrahana ny tena mpanadihady amin'ny sehatra iray. Ao amin'ny tantaran'i Marianne Vaatstra eva ihany koa, dia misy marika sandoka sandoka sy sandoka sandoka (Jasper S. sns) no mbola tadiavina mba hitazona ireo laisotra ireo amin'ny fofom-panala sy manify.
Toa Anass no voaresaka amin'ny alalan'ny fahafatesana / fakàna an-keriny squadron naniraka ny mpametaveta avo dia avo (ho an'ny herinandro volana) mialoha sy nalaina an-keriny an-dalana naka araka izay Nandeha bisikileta tamin'ny faritra toeram-ponenana ny trano famakiam-boky. Ny fametavetana sy ny famonoana farany dia tsy nitranga tao amin'ny 539 (akaiky loatra ireo niharam-boina ary angamba mety ho sarotra sy kely loatra).
Tsia, izy no firenena mahafinaritra trano, ny lapa izay angamba tsy lavitra ny fakàna an-keriny no misy toerana efa notampenam-bava sy drugged, izay ny fandraisana ny komity toppedofielen avo dia efa vita ny pataloha amin'ny lohalika na teo amin'ny mpijery mitafo. Mazava ho azy, ny fitaovana rehetra miaraka amin'ireo gadget farany amin'ny fisamborana horonan-tsary, fanaraha-maso sy fitsaboana.
Ny tena tsotra ny hamaha ity raharaha ity no izy lahatsary kely ny fijery ny zavatra rehetra mba hahazo ny tanana, kely youtuben, tambajotra anatiny, Twitter ary Facebook sy ny Dia izay tsy afaka, satria na dia ny pedo fanisana (ny fihetseham-po manerana ny firenena pulp taratasy) na tsy miraharaha intsony NOS (Foundation Denialation Dutch) !!!
Izany asa izany.
Anti deVriesmaffia / Desambra 23, 2013
Ny pilotan'ny helikoptera dia diky.
dia sarotra ny hahita ny fomba fiantsoana azy.
trebor2110 / Desambra 22, 2013
Martin ahoana no nahafantaran'ity ramatoa ity ny olona iray fa tsy izy, raha izy irery no nahita sarin'olona iray tao anaty fitaratra fotsy tsy misy tarehimarika ??
Mety ho karazana jogging hafa, karazana loko hafa, tavy samihafa, raki-peo samihafa amin'ny mpihetraketraka kokoa lehibe kokoa kokoa kokoa?
Fotoana 2: 36
martin freedom / Janoary 4, 2014
Moa ve ny Omroepwest no nampiasaina mba hizarana ny fampahalalam-baovao diso? Nahoana no nisy ekipa fakan-tsary tamin'ny maraina niandry ny fitsangatsanganana tanteraka raha tsy nisy ny fanamarihana fa hitan'i Anass! Izany no fanontaniana manan-danja indrindra izay anontosaintsika momba ny fampielezam-peo ...
schnijder / Desambra 22, 2013
Ny vondron'olona goavana (Humilian) dia mbola tsy nahatsikaritra izany.
Azafady mba lazao 1000 x 1000 fotoana fohy
Zavatra tsy azo tsapain-kevitra avy amin'ny Sampan-draharahan'ny Fampanoavana, avy amin'ny NFI ny renim-pianakaviana, na Anass, na avy amin'ny famadihana ny rahavaviny !!!
Tsy tokony hieritreritra ny MK-Ultra ve isika sa zavatra toy izany? "
Moa ve tsy somary hafahafa fa Zatovo 13 izay tia ny fianakaviany sy ny sisa mba hihaino ny fianakaviany dia nanoratra taratasy fanaovam-beloma teo aminy izy, na dia vitsivitsy monja teny toy ny miala tsiny aho, tsy afaka maka izany intsony, ary nahoana no ny Reny mividy akanjo vaovao, raha tsy mahazatra izy rehefa nandeha tany amin'ny trano fonenany izy?
Elien / Janoary 7, 2014
Nahazo akanjo vaovao vaovao i Anass ny tolakandro talohan'ny namonoana azy dia tsy misy ifandraisany amin'ny vono olona. Izany dia tsy maintsy natao tamin'ny fisintonana. Ny fotoana izay hividianan'ireo ray aman-dreny zaza mitombo. Tena misy fisainana ara-drariny tokoa ve izay sahy mieritreritra fa ny renin'i Anass dia manana zavatra tokony hataon'ity mpamono ity !!! Manao ahoana ny halavirana? Maharikoriko ny sahy mieritreritra izany. Manadino tampoka ny tovolahy COC izay manaparitaka ny pelaka ao amin'ny sekoly ambaratonga faharoa? Izany griezeltje ny craziness tsy nahalala firy izy mailaka Martin efa nandefa tao anatin'ny adiny iray, ary saika tamin'ny lohaliny nandry hangataka Martin raha tsy manonona ny anarany, mifandray amin'ny asa (izany hoe mpiasa an-tsitrapo) tao amin'ny COC in Leyde . Tsy hadinonay fa ity hadika ity, i Erwin Vosse dia nanao firaisana ara-nofo tamin'ilay mpanompo izay nandray anjara tamin'ny fanadihadiana momba ny famonoana an'i Anass. Tsy hadinontsika fa tamin'ny alin'ny famonoana an'i Anassa, ity mpanompo ity dia nanangona ny fanalahidin'ny savony avy amin'ny bisikiletan'i Anass niaraka tamin'ny renin'i Anass. Ity toeram-piaviana ity dia tsy hiaraka amin'i Erwin Vosse eo anoloan'ny tranony eo amin'ny toeram-pivoahana bisikileta na orana. Misy ihany ve ny fampahalalana raha toa ka nanompo tao amin'ny Hoekje café (na inn 't hoekje) i Erwin Vosse Fantatrao, eo an-joron'ny fidirana an-tsena. Fantatrao, io lalana io dia mety nivezivezy nankany amin'ny tanàna (bibliothèque) any Oostdorp i Anass. Raha ny marina dia nonina tao amin'ny Kasstraat i Anass. Ny Kasstraat izay misy ny trano 14. Raha tsy nanelingelina ny polisy ny fanadihadiana manodidina ny manodidina ary nangataka ireo mpifanolo-bodirindrina akaiky raha nahamarika zavatra iray manokana momba an'i Anass izy ireo.
Anass, izay nahazo fampahalalana tao amin'ny sekolin'i Erwin. Izany tamin'ny fotoana nisy fifanakalozana teo amin'ireo mpianatra avy any Danemark sy Espana. Avy amin'ny Viborg sy Mazarron. Maro ireo sarin'ity fifanakalozana ity no tao amin'ny tranokalan'ny kolotsain'i Adelbert. Vakio: "mitsangana". Raha mandinika an'i Anass ianao ao amin'io tranonkala io, dia azonao ny hafatra: "tsy misy ity pejy ity". Raha mitady ny Adelbert amin'ny Google ianao, dia misy fizarazarana hafa ny lohahevitra iray ary i Anass dia iray amin'ireo lohahevitra ireo. Rehefa manindry izy dia miharihary fa tsy misy intsony izy. Marina izany. Tsy misy intsony izy. Novonoina izy ary ny tompon'andraikitra dia araka ny ambaran'izy ireo ao amin'ny toeram-pandevenana. Izany no teo. Tiako ny nanipy azy tao anatin'io lavaka io, ilay namono maloto.
Anass, tsy hanadino anao mihitsy aho. Manantena aho fa hohitsakitsahina ny tomponandraikitra. Mampalahelo fa tsy hitranga izany amin'ny alalan'ny sehatra ara-politika. Ao amin'ny sofiny ihany koa izy ireo.
Van Der Jagt Gea / Desambra 22, 2013
Tsy vitako ny mifehy ny hatezerako momba ity lahatsoratra ity ary noho izany dia mamaky ny fahanginako aho.
Efa sahirana amin'ny Krismasy ve ianao ary manantena ny hiafaranao?
Efa nanapa-kevitra ny amin'izay hohaninao amin'ny Krismasy ve ianao?
Moa ve ny sitraponao hanadino mora foana ny fahoriana rehetra eto amin'izao tontolo izao?
Aza mieritreritra ny olona manantena ny hahazo sakafo.
Tsy mieritreritra an'i Joris Demmink, izay mibanjina ny borikin'ny ankizy
Tsy lazaina intsony hoe Mr Kleinsma sy ny fampielezan-keviny.
Notaterina tamin'ny Parlemanta Eoropeana.
Tsy misy toerana ho an'ny vato fehizoron'ny fiarahamonina, simenim-pirenena Eoropeana ihany.
Hanjary halavirina ianao ary hanjavona indroa.
Efa nafafy ilay milina fampielezan-kevitra.
Ary efa nilalao teo akaikin'ilay vilany ianao.
Raha fintinina dia efa adinoina i Anass.
Ao anatin'ny fahatsiarovana, azo antoka!
Tsy misy dikany intsony ny fahafatesany.
Noho ny fijoroana vavolombelona diso.
MISY IZAY ITY !!!
Mbola manantena ny fotoana tsara kokoa aho.
Ao anatin'izany lehilahy izany no sahy mibaboka ny tena maha-izy azy.
Ilay lehilahy sahy miova fo.
Ary te-hianatra amin'ny fahalemeny manokana.
Amin'izay dia tsy voatery hijery olon-kafa izy.
IZAHO HANANA IANAO TONTOLO IZAO HO ANY AN-DAHOLO SY NY FANDAMINANA HO TRATRANTSIKA NY TONTOLO IZAO!
fleur98 / Desambra 22, 2013
Ny trangan'i Anass manontolo dia sangisangy goavana ...
Ny endri-tsoratry ny tendron-tsoratr'i Anass mazava tsara dia mampiseho fa novonoin'ny VERWURGING izy ary tsy nanantona.
Saingy (afa-tsy) ao Anass, ity lasitra ity, araka ny fanadihadiana ara-teknika na ny fitsarana, dia tampoka vokatry ny fampiatoana, pfff.
Raha marina ny marina, ny tany dia mitovy ihany koa araka ny azy .... !!
Raha toa ny rariny, tsy misy pôlophile miasa any amin'ny polisy ...... .. !!
roccpro / Desambra 23, 2013
Anass Aouragh - Fanavaozana ny NFI Analysis
trebor2110 / Desambra 23, 2013
Nahoana no rava io sampana io ?????
6: 21 fa, angamba ny vatany dia tsy nandry tao omaly alina
Nahoana io vehivavy io no manoro hevitra fa ?????
Pablo El Campecino / Desambra 23, 2013
Naharay ity hafatra ity tamin'ny alàlan'ny fahalalana digi tao amin'ny facebook aho:
Te-handefa drone amin'ny olom-pirenena i Opstelten
Ka amin'ny hoavy dia hahazo Drones eo ambanin'ny hazo Noely ianao fa tsy fanomezana na drôna ao an-tampon'ny hazo Noely fa tsy kintana Krismasy.
maasdonk / Desambra 23, 2013
Taorian'ny didim-pitsarana ny raharaha amin'izao fotoana izao ao Rishi any Londona dia ny fanjakana polisy zava-misy, samy nanangana ,, ,, afaka izao polisy nitifitra ny basy araka izay / noheveriny ,, ,, fa ny olom-pirenena voaomana.
Junta neomaxima dia zava-misy.
Anass dia iray amin'ireo niharam-boina tamin'ny kolontsa maloto ary nanakorontana tanteraka ny repoblika ,, izay ahafahan'ny mpanondrana ankizy manapaka firenena.
Fiafarana malalaka sy demokrasia, manomboka ny fampihorohoroana amin'ny sivily.
Taorianan'ny herinandro pastoran'i Onno dia fantatro tsara, malemy ny vahoaka ary manaiky ny zava-misy ho takalon'ny fiadanan-tsaina.
2014, inona no hahatonga antsika ho kilercops kokoa, loza mitatao amin'ny indostria, ireo ankizy novonoin'ireo ray "tsy misy" ary ireo tovolahy mihantona amin'ny anaran'ny ???
Ary ahoana raha tonga avy hatrany ny mpitsikilo ny polisy, afaka milaza foana izy fa diso izy ary nihevitra fa naka ny mpandihy izy fa tsy basy iray.
Tao / Desambra 23, 2013
Ny fitiavana no fototry ny zavatra rehetra mitoetra. Ny zavatra rehetra dia mifandray amin'ny fitiavana, tanteraka avokoa.
Julia Cameron, mpanoratra amerikana
rashuan / Desambra 28, 2013
Karazana alika inona no nampiasaina hitadiavana an'i Annas? Azonao atao ny manofa alika hitady fofona manokana. Mba hisorohana ny "fikorontanan'ny fofona", ny alika K9 dia matetika no ampiofanina amin'ny fofona iray manokana fa tsy amin'ny karazana disciplines hafa. Ny alika hitadiavana tsara indrindra ho an'ny fofona manokana dia:
Fikarohana momba ny fitrandrahana alika
Alamino ny sisa tavela amin'ny alika
Amin'ny ankapobeny, ny fikarohana dia tsy maintsy tanterahana ao anatin'ilay sehatra fikarohana, anisan'izany ny helikoptera? Moa ve ny rariny tsy manahy raha tsy mahita vatana ianao ao amin'ny faritra kely toy izany? Tsy mahatsiaro tena aho, satria voatsikera aho raha tsy nanao zavatra marina, na antoko na izaho. Raha ny marina, i Wouter Bos (manampahefana mpanao gazety) dia miteny hoe: ny kalitaon'ny serivisinay dia tsy afaka manakana anay tsy handinika ny tanjontsika amin'ny tranga toy izany. Sa tsy te hahita azy? Raha tsy azonao hazavaina hoe nahoana ianao no tsy nahita an'i Annas, tsy azo antoka ve fa tsy nahita azy ianao satria tsy teo izy? Avy eo dia ho tonga avy hatrany ianao: inona
dia mitranga eo anelanelan'ny fotoana fijanonana ny fikarohana sy ny fitadiavana ny vatana.
Fa kosa, manolo-kevitra fa teo izy io, saingy tsy fantatra mazava hoe nahoana izy ireo no tsy nahita izany. Azoko an-tsaina ihany ny antony 1 noho ny antony tsy nahitana azy: ary noho ny famonoana famonoan-tena dia tsy tokony ho toy izany intsony !! Satria tsy afaka mampiasa famonoan'olona any Wassenaar izy ireo. Mandamina ny tenanao:
- Ny iray dia miantso azy hoe 'firaisana ara-nofo', ny iray hafa, somary mendri-kaja kokoa, ny 'Wassenaar nazit'. Taorian'ny fivorian'ny birao tamin'ny 13 Febroary (andro 5 mba hitadiavana an'i Annas), mpikambana mpikambana sivy miisa mihoatra ny alikaola no nijanona tao ambadiky ny dimy maraina, ary nisy siny valo avy amin'ny liquor.
Misy ny demagogia eto miaraka amin'ny fihetsika manodinkodina (Suicide)
Tsy misy tsy misy herisetra, satria lehibe i Allah
Ny tena diky-lijstertje Erwin Fox (gosh, dia efa nandre izany anarana izany) nilaza fa efa nampiasa zava-mahadomelina nahy alika amin'ny fitadiavana Anass, izay mety hamitaka izao tena mino fa isika rehetra instinken any. Izy ve indraindray ny mpitondra tenin'ny polisy Wassenaar? Raha namorona ilay namany ilay namany, indraindray. Famoahana ny laharana 1276 amin'ny fisavana.
Koos van Woudenberg / Desambra 29, 2013
Ny famantarana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo mpanao gazety tsy ampoizina sy ny governemanta dia tsy misy afa-tsy amin'ny sehatra "heloka bevava", ohatra an'i Vaatstra, Oldenbroek, Anass ary ny hafa.
Ao amin'ny sary dia ahitanao an'i Mr. De Vries miaraka amin'i Nathalie Kramers, Lehiben'ny polisy ao Frantsa ary / na Drenthe, izay samy Lehiben'ny Tafiky ny Polisy any avaratr'i Holandy miaraka amin'i Pauw sy Witteman.
Ary jereo ny fomba nifangarohan'i Achmea amin'ny adihevitra sosialy, ohatra amin'ny Fifanarahana amin'i Achlum http://www.conventievanachlum.nl/ Ihany. Afaho amin'ny lisitry ny vahiny.
Tsy voatery ho nangonin lotterberg na balafomanga mpahay siansa ny mahita ny fomba "anti-tabataba" Azo kilemaina mampiasa fivoriambe, toy ny ara-toekarena Tapahina ireo taratasim, na raha tsy manampy ny fitoriana miaraka amin'ny kely kely ny ADN.
Ohatra tsara amin'ny manodidina ahy ny tranga VIH momba ny VIH. Toa an-toerana noho ny faritany zavatra (izay ny fuck namorona izany anarana izany?) Inona no hanampy anao ho tsotra loatra mety raha ny manam-pahefana maro pelaka toerana nanorim-ponenana ny olona mba hanompo ny vahoaka be nuisance latsaky ny sakana ara-jeografika ny fanenjehana? Ary iza no "nomelohina" tamin'ny guillotine ara-toekarena sy ny lalànan'ny heloka bevava rehefa tsy nanao fanekena izy ireo ary nanakiana? Ary tsy manan-danja: iza no nisintona ny honina tao amin'ny Fitsarana?
Atỳ an-oorwassende ny fananany iray mpitsoa-ponenana taratasy avy amin'ny ben'ny tanàna ny olona iray izay (marina) miahy ny fitondran-tenan'ny Groningen mpiasam-panjakana amin'ny firaisana ara-nofo ny fahadisoan-dàlana (angamba no famantarana mampiavaka ny taratasy ao amin'ny pelaka amin'ny chat?)
Misaotra fivoriamben'ny vondrom-paritra any amin'ny iniana aretina (pozzen) ny tena mpanao heloka bevava SM / BDSM ny efa misy amin'ny sehatry ny pelaka banga trano fanatobiana entana any Amsterdam sy miteny ratsy 14 taona testosterone ankizilahy tao amin'ny Villa any Bergen sy ny "zava-bita" ny manam-pahefana sivily sy ny -their-hielenlikkende-ary-katsentsitra fotsiny amin'ny tsy misy vokany ny governemanta ny kely miahy ny fahasalamana ny zavatra efa nifanaiky teo lalàna. Satria izany dia mitarika ho amin'ny faneriterena ny fahalalahana, indrindra amin'ny sehatra tsy miankina, dia ny fisainana goavana indrindra.
Ary eny, te-ho afaka ny ho tafody soa aman-tsara ihany koa aho, hohajaina tsara eny an-dalambe ary tsy ho voasakantsakana amin'ny asa sosialy. Saingy tsia, tsy nangataka an'io fandaminana kriminika io aho - na ny toa azy.
Van Der Jagt Gea / Janoary 6, 2014
TSY MISY LALANA.
Aza tezitra mafy loatra amin'ny fitsaranao momba ny reniny.
Ny reniny dia miaro ny zanany vavy, matahotra ny hamoy azy koa.
Ny zanakavavy dia tsy te hoentina tahaka an'i Anass ary lasa azy ankehitriny, noho izany dia namoy ny zanany roa ny renim-pianakaviana.
Angamba izany no antony nanomezan'ilay reny anao izany lalao izany.
Satria satria tsy afaka manambara ny marina izy.
Na mba hampisehoana ny halalin'ny fitarihana azy sy ny olona izay tsy maintsy ataonao koa.
Amin'izany, ny tahotra dia mpanolotsaina ratsy.
Fantaro fa mahalana ny mpamono no mamono olona iray, fa matetika no avy amin'ny olona niharan'ny herisetra.
Tsy dia misy dikany loatra ny manandrana ny tantsaha raha mbola miafina ao ambadiky ny ridao ny mpamorona.
Raha ny marina dia hanohy hitady ny niharam-pahavoazana izay te ho tonga tompon'andraikitra izy.
Fotoana izao hialana amin'ny anjara asan'ny traikefa ary handray andraikitra amin'ny hetsika ataontsika, mba hahafahantsika manery ny mpamorona haka andraikitra manokana, mba hahafahan'izy ireo ho tompon'andraikitra amin'ny fitondrantenany.
Avelao ny taona 2014 dia hisaintsaina, hanandrana hanampy ny olona handresy ny tahotra.
Amin'ny alalan'izany no anampiantsika ny olona hanome hery ny andraikiny manokana sy ny fahafahany manapa-kevitra amin'ny zavatra takiana.
Avelao izahay hitsahatra tsy hifamaly ary hanome ny heviny manokana.
Satria fantatry ny tsirairay ny fahamarinany.
Ary raha mianatra mifampihaino isika nefa tsy mametraka ny fahamarinantsika voalohany dia mahita ny fahamarinana manerana izao tontolo izao isika.
Ny fahamarinana mampifandray antsika.
Raha tena mikaroka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ianao dia tsy maintsy manaiky ny fahamarinana manerana izao tontolo izao fa tsy mitsara.
Tiako ianao sy ireo mpiara-belona aminao tsy mivadika amin'ny fahafahana mamela ny olona hisaintsaina, hanome azy ireo ny hery hanampiana ny tontolo malalaka ho an'ny rehetra.
NY TONTOLO VAOVAO!
Henk. Hitako ihany koa fa mahatsiravina ny mamaky fa misy mampangina ny miampanga ny renin'i Anass. Avelao isika hivoaka ao an-tsaintsika io hevitra io ary hametraha ny tenantsika amin'ireo zavatra tena misy ifandraisany amin'izany.
Saina avy amin'ny AIVD famonoan-trosa Anass « - [...] ao ambadik'ity pejy ity dia nanambara fa nanomboka nametraka ny pejy manaraka ny lahatsoratro momba ny famerenana isan-taona. Ao anatin'ny ...
VAOVAO VAOVAO ISAM-PARITRA VAOVAO ARA-PITSARANA ISAM-PARITRA MOMBA ANAY - [...] Mahatsiaro mafy loatra fa ny fofona dia mivoaka amin'ny efitranonao! Efa nisy fiaraha-misakafo teo amin'ny raharaham-barotra ...
Ny alakamisy 6 tamin'ny fihetsiketseha-panoherana ho an'i Hague dia ny fanatsarana ny raharaha Anass « - [...] namono tena i Anass ary namidiny foana izany tamin'ny fampahalalam-baovao noho ny fampijaliana olona.
Ny alakamisy 6 tamin'ny fihetsiketseha-panoherana ho an'i Hague tamin'ny fanazavany ny raharaha Anass Martin Vrijland - [...] namono tena i Anass ary namidiny foana izany tamin'ny fampahalalam-baovao noho ny fampijaliana olona.
Saina avy amin'ny tranga AIVD momba an'i Infotra Anass Martin Vrijland - [...] ao ambadik'ity pejy ity dia nanambara fa nanomboka nametraka ny pejy manaraka ny lahatsoratro momba ny famerenana isan-taona. Ao anatin'ny ...